Toca Kicheni, yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Toca Kicheni, yemahara kwenguva shoma
Zvinotaridza kuti svondo rino rine zvese zvinoratidza kuti rakafanana neiro rapfuura, mune mashoma mashandisiro nemitambo zvakasununguka kwenguva yakati rebei. Pane mashoma mashandisirwo nemitambo zviripo svondo rino kurodha mahara, zvakakodzera kuti uburitse pachena Toca Kicheni, kubva kune vanogadzira Toca Boca, yatatotaura kare pane yakawanda nguva. Ino nguva uye sekuratidzwa kwezita, vana vedu vanozozviisa mushangu dzemubiki, mubiki uyo achafanirwa kufudza mavara emutambo.
Zvinoenderana nemubatanidzwa wekugadzirira watinopa kuvashanyi vedu, zvakanaka vana vedu, izvi vanozogona kuratidza kutenda kwavo kana kusafara (Zvikafu zvine munyu uye zvinonaka hazvisi zvinosetsa kwavari). Uyu mutambo unonyanya kuita chinhu chekutambisa chevana vedu, vanofarira Master Chef zvakanyanya, kutanga kugadzira yavo yekutanga miti yemipaini mukicheni, kuchengetedza madaro. Kunge mitambo yese kubva kumugadziri uyu, hapana muganho wenguva, mimhanzi yekutanga kana zvibodzwa zvinoenderana nezvikafu zvinogadzirirwa nevaenzi vedu
Toca Kicheni Zvimiro
Toca Kicheni inotipa anosvika mana mavara akasiyana atinofanira kufudza kuitira kuti vasafe nenzara.
Kugadzirira chikafu, tine gumi nemaviri zvigadzirwa, zvigadzirwa zvatinogona kusanganisa munzira zana nemakumi masere.
Tinogona kucheka chikafu, kubika, kuchipisa, kubika mu microwave ...
Mutambo wacho unotipawo nzira yemidziyo yatiri kungoshandisa miriwo chete.
Iyo mifananidzo, senge mizhinji mitambo yeToca Boca, inotibvumidza kubata vashandi uye nemidziyo nenzira yakapusa.
Pasina chero mukati me-app kutenga kana kushambadzira kushambadzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Toca Kicheni, yemahara kwenguva shoma
Iyo Omna 180 Cam HD Kamera inotanga kutengeswa muApple Chitoro
Apple inozivisa WWDC 2017 kuti iitwe muna Chikumi 5-9